Bartlett inuu kaqeyb galo Shirka Golaha Fulinta ee Ururka Dalxiiska Aduunka 110th
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » Bartlett inuu kaqeyb galo Shirka Golaha Fulinta ee Ururka Dalxiiska Aduunka 110th
Wararka Ururada • Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Jamaica News Breaking • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Ogeysiisyada Saxaafadda • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett ayaa lagu wadaa inuu kaqeyb galo Shirka Golaha Fulinta ee Ururka Dalxiiska Adduunka ee Qaramada Midoobay (UNWTO) 110th, inta lagu jiro mudada Juun 16 - 18, 2019 ee Baku, Azerbaijan.
Wasiirka Bartlett iyo wafdigiisa waxay sidoo kale u isticmaali doonaan fursada si ay u bilaabaan wadahadal ay la yeeshaan Xoghayaha Guud ee UNWTO, Mr Zurab Pololikashvili, oo ku saabsan kulanka 2020 CAM iyo sidoo kale Shirka 2020 ee Caalamiga ah ee ku saabsan Innovation, Resilience iyo Maareynta Dhibaatada, kaas oo Jamaica ay si wada jir ah u martigelin doonto UNWTO.
Waxaan rajeyneynaa inaan martigelinno shirkii ugu horreeyay abid ee adkeysiga dalxiiska adduunka iyo maaraynta dhibaatooyinka ee Montego Bay. Jamaica sidoo kale waxay martigalin doontaa kulanka 2020 ee Ameerika. Dadaalkan dib-u-noqoshada wuxuu dhigayaa Jamaica, kaliya ma ahan tixraaca udub-dhexaadka adduunka ee hal-abuurnimada, adkeysiga iyo maaraynta dhibaatooyinka laakiin sidoo kale wuxuu diiradda saarayaa dhammaan Ameerika marka laga hadlayo ka-wada-hadalka CAM, ”ayuu yiri Wasiirka.
Marka lagu daro Agenda-ka caadiga ah ee Kalfadhiga 110-aad, UNWTO waxay martigelin doontaa gole gaar ah oo cinwaan looga dhigay "Badbaadinta Hidayaasheena: Bulshooyinka, Dhaqanka iyo Joogtaynta Deegaanka" Juun 17, 2019. Tani waxay la jaanqaadaysaa aagga mudnaanta u leh ee UNWTO waxayna ahayd gaar ahaan loogu talagalay Wasiirada Xukuumadda, kuwaas oo fursad u heli doona inay cabiraan aragtidooda isla markaana raadiyaan xal wadajir ah.
Wasiirka Bartlett waxaa weheliya Mrs. Jennifer Griffith, xoghayaha joogtada ah iyo Miss Gillian Baldeo, agaasimaha isgaarsiinta, horumarinta wax soo saarka. Waxay ku laaban doonaan Jamaica markay tahay Juun 20, 2019.